မေတ္တာတရားသည် ဘာသာ အားလုံး၏ ဆုံချက်ဖြစ်ပြီး ယင်းအပေါ်တွင် ဘာသာဝင်အားလုံး ရပ်တည်နိုင်ရန် အား? - Yangon Media Group
ဘာသာတရားတိုင်း အလေးထား သည့်မေတ္တာတရားသည် မတူညီသောဘာသာ အားလုံး၏ တူညီသည့်ဆုံချက်ဖြစ်ကာ ယင်း ဆုံချက်ပေါ်တွင် ဘာသာဝင်အားလုံး ရပ်တည် နိုင်ရန် အတူတကွ ကြိုးစားအားထုတ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုသည်။ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးထွန်းကားရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပြုလုပ်သည့် ဘာသာပေါင်းစုံငြိမ်းချမ်းရေးဆွေး နွေးပွဲကို နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်က နေပြည်တော် ရှိ MICC-2 တွင် ကျင်းပချိန်၌ အဖွင့်မိန့်ခွန်း တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
”ဘာသာတရားတိုင်း အလေးထားသော မေတ္တာတရားသည် မတူညီသောဘာသာအား လုံး၏တူညီသောဆုံချက်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်း တူညီသောဆုံချက်ပေါ်တွင် မတူညီသောဘာ သာဝင်အားလုံးက ရပ်တည်နိုင်စေရန် ဝိုင်းဝန်း ၍ အတူတကွ လက်တွဲကြိုးစားအားထုတ်ရပါ တယ်”ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြော ဆိုသည်။
ထို့အပြင် ကိုးကွယ်မှုဘာသာတိုင်းတွင် မေတ္တာတရားကို ဘာသာတည်ထောင်သူများ အားလုံးက အလေးထားဟောပြောသင်ကြား ခြင်းများရှိကြောင်း ပြောဆိုသည်။ ဘာသာ တရားတိုင်းတွင် မကောင်းမှုကို မပြုလုပ်ရန်၊ ကောင်းသောအလုပ်နှင့် ကောင်းသောအပြော တို့ကို ကျင့်သုံးရန်၊ စိတ်ကိုဖြူစင်အောင် တည် ဆောက်ရန် လမ်းညွှန်သင်ကြားမှုများရှိသော် လည်း ဘာသာအများစုသည် ထိုသင်ပြချက် များကို လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးရန်၊ အချို့ ဘာသာများတွင် လိုအပ်ချက်များရှိနေကြောင်း ပြောဆိုသည်။ အချို့သောဘာသာရေးခေါင်း ဆောင်များ၊ သင်ကြားရေးဆရာများသည် ¤င်း တို့၏ ဘာသာတရားများ၏ မူရင်းအစစ်အမှန် ဒေသနာတော်များကို လွဲမှားစွာ အနက်ဖွင့်ဆို ခြင်းကြောင့် နောက်လိုက်ဘာသာဝင်များသည် လည်း လွဲမှားသောအခြေအနေတွင် အသုံးချ လိုကြခြင်းကြောင့် လမ်းမှားကို ဦးဆောင်ညွှန် ပြသကဲ့သို့ရှိကြောင်း ပြောဆိုသည်။
”မတူညီကွဲပြားသော ဘာသာဝင်များ အကြား အပြန်အလှန်နားလည်မှု၊ လေးစားမှု ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်လျက် ငြိမ်းချမ်းလုံခြုံ သော သာယာသည့် လူ့ဘောင်ဘဝ တည် ဆောက်ရန် လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ မတူညီ ကွဲပြားသောဘာသာဝင်များ အကျိုးဖြစ်ထွန်း စေရေးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်တွင်း၌ အသိ Óဏ်ဦးစီးသော နှလုံးသားစိတ်စေတနာ ဖွံ့ဖြိုး ရှင်သန်အောင် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြပါစို့ဟူ ၍ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်”ဟု ဆက် လက်ပြောဆိုသည်။ ထို့အပြင် မတူညီသောဘာသာဝင်များ အကြား ပဋိပက္ခအသွင် ရှောင်ရှားပြီး ငြိမ်းချမ်း ရေးနှင့် လုံခြုံမှုကို တည်ဆောက်နိုင်ရန် လိုအပ် ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမူတူးစေးဖောက ”မေတ္တာ တရားထားတယ်ဆိုတာ အလျှော့ပေးခြင်း၊ အရှုံးပေးခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ မေတ္တာဖြင့် ရှုံးနိမ့် ခြင်းဆိုတာမရှိဘဲ မေတ္တာဖြင့် အောင်နိုင်ခြင်း ဆိုတာ ဘာသာတိုင်းမှာ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ယခုအချိန်အထိ ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်တဲ့ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေရဲ့ အခြေခံအကြောင်းရင်းတွေဟာ မတူကွဲပြား မှုတွေကို လက်ခံ၊ အသိအမှတ်ပြုမှု၊ လေးစား မှုမရှိခဲ့တဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအား ဖြင့် လောကပါလတရားမရှိမှုကြောင့်ဖြစ်ပါ တယ်။ အမျိုးသားရေးအရ၊ ယုံကြည်မှုဘာ သာတရားအရ၊ နေထိုင်ရာဒေသအရ မတူ ကွဲပြားမှုတွေအကြားမှာ လွတ်လပ်မှု၊ တန်းတူ ညီမျှမှု၊ တရားမျှတမှု အစရှိသည့် အခြေခံ တရားတွေ ကျင့်သုံးမှုအားနည်းခဲ့တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောဆိုသည်။
ဘာသာပေါင်းစုံငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ ကို နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက် မှ ၂၂ ရက်အထိ နှစ် ရက်ကြာကျင်းပခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယနေ့ကျင်းပသည့်အခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံတော် ၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင် ဒုတိယတပ် မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီးစိုးဝင်း၊ ရန်ကုန်ကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော် ကာဒီနယ်ချားလ်စ်ဘို၊ ငြိမ်းချမ်း မေတ္တာအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်ဆွေ၊ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ဘာသာပေါင်းစုံငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့မှ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဥက္ကဋ္ဌ ဘုန်းတော်ကြီး ဂန်နာ စတောလ်ဆက်၊ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအ ရုံးဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမူးတူးဆေးဖိုးနှင့် အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
တိုက်ပွဲရှောင် စခန်းများ ကြာရှည် တည်တံ့ခြင်းသည် ငြိမ်းချမ်းမှု အလှမ်းဝေးခြင်းနှင့် ဖွံ့ ဖြ??
အမေရိကန် စစ်တပ်မပါဘဲ အာဖဂန်စစ်တပ်က တာလီဘန်တွေကို ခုခံနိုင်ပါ့မလား